RASMI: Son Heung-min oo markii afaraad ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee South Korea – Gool FM
RASMI: Son Heung-min oo markii afaraad ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee South Korea
(London) 19 Dis 2019. Ciyaaryahanka Son Heung-min ayaa si rikoor ah loogu magacaabay markii afaraad xiddiga sanadka ugu fiican South Korea.
Xiriirka kubadda cagta Korea ee The Korea Football Association ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ah in Son oo weerarka uga dheela kooxda reer England ee Tottenham Hotspur uu ku guuleystay abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican sanadka 2019 dhanka wiilasha.
Son ayaa sidoo kale abaal-marintan ku guuleystay sanadihii 2013, 2014 iyo 2017, waana rikoor in maanta markiisii afaraad uu ku guuleysto abaal-marintan, isagoo sidaas kaga sare maray ninka saddexda jeer ku guuleystay ee Ki Sung-Yeung kaasoo abaal-marintan hantay sanadihii 2011, 2012 iyo 2016.
Son wuxuu ugu sareeyay codbixinta warbaahinta iyo guddiga doorashada KFA, ciyaartoyda ayuuna noqday kan ugu codadka badanaa, waxaana Son uu la yimid 209 dhibcood.
Waxa uu noqday Son ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda Korea ee kubadda cagta Yurub 6 bishii November, markii uu labo gool ka dhaliyay tartanka UEFA Champions League si uu uga gudbo rikoorkaas oo uu haystay halyeygii hore ee Bundesliga, Cha Bum-Kun, kaasoo haystay 121.
Horraantii sanadkan, Son wuxuu ka caawiyay Spurs inay gaaraan finalkoodii ugu horreeyay ee UEFA Champions League. wuxuuna dhaliyay 20 gool 48 ciyaarood oo uu saftay intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2018-2019.